My father’s younger brother U Aung Thein @ Bakyu Bai (Bakyu Kyar Kyar) retired AME Myitnge Railways passed away today. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMy father’s younger brother U Aung Thein @ Bakyu Bai (Bakyu Kyar Kyar) retired AME Myitnge Railways passed away today. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un
My father’s younger brother U Aung Thein @ Bakyu Bai (Bakyu Kyar Kyar) retired AME Myitnge Railways passed away today. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un
June 12, 2017 June 12, 2017 drkokogyi
My father’s younger brother U Aung Thein @ Bakyu Bai (Bakyu Kyar Kyar) retired AME (Assistant Mechinical Engineer) Myitnge Railways Carriage Repair and Painting Factory of Bama Railways passed away at 5:05am this morning (12.6.17) in Yangon, Myanmar.
ကွယ်လွန်သူအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ ကရုဏာတော်အဖြာဖြာ၊ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ကျရောက်ပါစေသား။အင်နာ လစ်လာဟိ ဝ အင်နာ အိလိုင်းဟိ ရားဂျိအူးန်မုချဧကံ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အဖို့သာ ဖြစ်၍ ဧကန်အမှန် ထိုအရှင်မြတ်၏ ထံတော်သို့သာ ပြန်လည် သွားကြရမည့်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
Maung Maung shared Khin Maung Htwe’s post.11 hrs ·
ကျွန်တော့ ဖခင် မရဟွမ် ဦးအောင်မင်း ၏ ညီရဲ့
အလ္လာဟ်အရှင် သည် အကောင်းဆုံးကို စီမံတော်မူ
ကျာကျာ ၏ အပြစ်များမှ မဖ်လုပ်ချမ်းသာပေး
တော်မူပြီး မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းများ
Dr. Khin Maung Htwe
ကျွန်တော့ဖခင်ရဲ့ညီ ဦးအောင်သိန်း အငြိမ်းစား AME မြန်မာ့မီးရထားသည် ယနေ့နံနက် ၅:၀၅နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ၁၁၃လမ်းနေအိမ်မှာ အလ္လာအသျှင်၏အမိန့်ခေါ်ခံယူပြီး ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားပါတယ်။
ဇဟိုရ်ပြီး ရေဝေးဂဘာရ်စတာန်တွင် သင်္ဂြိုလ်ဒါဖွနာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဂ္ဂဖွေရသ်ဒိုအာပြုလုပ်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျ ။
← From U Aung San’s Hpar Naing Ngan to Hpone Hpone’s Auk Tan Zar Naing Ngan
Wirathu quoted out of context from Quran to insult Islam →